कलिकोटको ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्दै – डा. अप्सरा -
कलिकोटको ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्दै – डा. अप्सरा
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०२, २०७८ समय: १८:२८:४४
कालीकोट । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले ग्रामिण क्षेत्रमै पुगेर चिकित्साकीय सेवा प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा चिकित्सकीय सेवा विस्तार गर्न कार्यालयले प्रत्येक महिना एक हप्तासम्म गाउँमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएर सेवा सुचारु गरेको हो ।